people Nepal » डा बाबुराम भट्टराइले दिल्लीमा कस्तो भाषण गरे ? ( पूर्ण पाठ) डा बाबुराम भट्टराइले दिल्लीमा कस्तो भाषण गरे ? ( पूर्ण पाठ) – people Nepal
Posted on March 15, 2017 March 18, 2017 by Tara Nidhi
काठमाडौं, चैत्र । नयाँ शक्ति नेपाल, पार्टीका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराईले नयाँ दिल्लीमा नेपालको माओवादी आन्दोलनबारे लामो भाषण दिएका छन् ।
भारतको नयाँ दिल्लीमा आयोजित ‘काउन्टर टेरोरिज्म कन्फरेन्स’मा ‘बुलेट टु ब्यालेट’ शिर्षकको ब्यानरमा १० वर्षे माओवादी युद्धबारे लामो भाषण गरेका हुन् ।
आफूले माओवादी युद्धलाई शान्तिपूर्ण बाटोमा अवतरण गराएको उनको तर्क थियो । भट्टराईले संबोधन गरेको भाषणको पूर्ण पाठ यस्तो छ ।